Ny Etihad Airways dia mamadika ny andro fahatsiarovan-tena momba ny autisme ho matso amin'ny môtô
Aprily 30, 2017 0 Namaky 1 aho
Ny Etihad Aviation Group (EAG) dia nikarakara diabe moto manerana ny Emira Arabo Mitambatra ho fanohanana ny fahatsiarovan-tena momba ny autisme, fiaraha-miasa amin'ny Emirates Autism Society.
Mpandray anjara maherin'ny 200, ao anatin'izany ny mpiasan'ny EAG 40, dia nandao ny biraon'ny foibe Etihad Airways tany Abu Dhabi ny zoma 28 aprily ary nitaingina ny avaratry ny Emiratn Ajman, ary nifarana tao amin'ny Manampahefana jeneralin'ny fifanampiana ara-pahatanorana sy fanatanjahantena. Notarihin'ny Harley Owners Group (HOG), Abu Dhabi Chapter ny vondrona ary nizara isaky ny fijanonana an-dàlana ho any Ajman ny flyers miaraka amin'ny mombamomba ny fahatsiarovan-tena.
Ny Andriamatoa Sheikh Humaid bin Hamad Al Nuaimi dia nandray ny matso tao amin'ny Manampahefana jeneralin'ny fifanampiana tanora sy fanatanjahantena any Ajman.
Khaled Al Mehairbi, filoha lefitra zon'ny Abu Dhabi Airport Operations ary filohan'ny komity ara-panatanjahantena sy sosialy ao amin'ny Etihad Airways, dia nilaza fa "Faly izahay manohy ny fanohananay ny volana fanentanana momba ny aotisma, ao anatin'ny UAE. Mampiseho ny fahavononantsika handray anjara bebe kokoa amin'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny faritra. ”
Ny volana aprily, izay ekena ho volana fanentanana ho an'ny aotisma eo an-toerana sy iraisam-pirenena, dia fantsona iray izay anaovan'ilay kaompaniam-pitondrana andraikitra ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny mpiasa hampiroborobo ny fahatakarana sy ny fanentanana ny autisme. Tany am-piandohan'ity volana ity, EAG dia niditra amina orinasa, tranobe ary mariky ny sary an'arivony maro tao amin'ny 'Light It Up Blue' - hetsika manerantany ho an'ny Andro manerantany ho an'ny fanentanana ny olona manerantany, 2 aprily - tamin'ny alàlan'ny fandroana ny ivelan'ny trano misy azy amin'ny jiro manga, ny loko eken'ny tany ho an'ny autisme.
Southwest Airlines dia namoaka saran-dalana vaovao miaraka amin'ny crédit azo afindra
Previous Tsogo Sun dia nanitatra ny serivisy fampiantranoana fizahan-tany any Mozambika
Manaraka Fanendrena Etihad Airways: Gavin Halliday ho talen'ny fitantanana ny vondrona Hala